Fanirisoa Ernaivo: Facebook no nahafantarany fa nesorina tsy ho Mpitsara izy
lundi, 11 novembre 2019 08:24
Niparitaka tamin’ny tambazotra serasera sosialy facebook ny vaovao fa nesorina tsy ho Mpitsara i Fanirisoa Ernaivo, araka ny tapaka tamin’ny filankevitry ny fitsipi-pifehezana (CODIS: Conseil de Discipline) ny Filankevitry ambonin’ny mpitsara (CSM).
Nanamarina ny fisian’io fanapahan-kevitra io i Fanirisoa Ernaivo, fa na izy tenany aza gaga fa tsy mbola nahazo fampahafantarana ny fisian’io fanapahan-kevitry ny CSM io akory, nefa efa niparitaka tamin’ny facebook izany. « Tsy voahaja ny tsiambaratelon’ny fanapahan-kevitra », hoy i Fanirisoa Ernaivo, ary raisiny ho « fanalam-baraka » azy izao tranga izao.
Any Frantsa manaraka fiofanana i Fanirisoa Ernaivo amin’izao. Araka ny fanazavany, dia nahazo fiantsoana tokoa ny tenany hiatrika CODIS eo anivon’ny CSM ny 8 novambra 2019 amin’ny 9 ora maraina tamin'ny alalan'ny mailaka.
Niroso ny 7 novambra 2019 tontolo andro indray anefa ny CODIS, ary nitohy hatramin’ny 1ora maraina izany, nandraisana ny fanapahan-kevitra momba ahy satria handeha hiazo an’i Genève ny minisitry ny Fitsarana sady filoha lefitry ny CSM, hoy hatrany i Fanirisoa Ernaivo. Nahoana no naroso ny CODIS, hoy ity farany, sa nokendrena mba tsy hahafahako miatrika izany ?
Nanipika mazava i Fanirisoa Ernaivo fa sady tsy nangataka fandrosoana ny andro ny hiatrehany CODIS no tsy nangataka ny fanemorana izany ny tenany. Midika izany, hoy i Fanirisoa Ernaivo fa « tsy nohajaina ny zoko hiaro tena ».
Nisy ihany koa, hoy i Fanirisoa Ernaivo, andiana solombavambahoaka nanao fanangonan-tsonia nangataka tamin’ny CSM ny hanesorana ahy tsy ho mpitsara. « Fitsabatsabahana sy fanosihosena tsotra izao ny fahaleovantenan’ny CSM izany », hoy izy.
Hita rahateo izany ny nanatrehan'ny Sekretera jeneralin'ny presidansy, ary niray latabatra mihitsy tamin'ireo mpikambana CSM, nefa izy tsy anisan'ny mpikambana ary tsy tokony hiatrika izany akory.
Ny fanehoan-kevitr’i Fanirisoa Ernaivo teo Mahamasina ny talata 30 oktobra 2018 fony izy kandida tamin’ny fifidianana filoham-pirenena, mikasika ireo Polisy telo lahy maty niharan’ny fitsaram-bahoaka, raha namita iraka tany Ambodiazinina, Fenoarivo Atsinanana, no nanesorana azy tsy ho mpitsara. Maro koa anefa ireo mihevitra fa fanapahan-kevitra politika ny nandroahana an’i Fanirisoa Herinaivo, noho ny fanehoan-kevitr’ity mpitsara ity manodidina ny tetikasa « Tanà-Masoandro » an’ny fanjakana.
Milaza ny tsy hipetra-potsiny amin’izao i Fanirisoa Ernaivo fa mbola hampiasa ny zony hiarovany ny tenany. « Tsy mbola voasazin’ny CODIS aho », hoy izy. Ny minisitry ny Fitsarana no namoaka fanapahan-kevitra nampihantona ahy tamin’ny asako nandritra ny enim-bolana sy ny zo sitrahako mifanaraka amin’izany. « Rehefa tsy niakatra CODIS aho anatin’ny enim-bolana nivoahan’io didin’ny minisitra io dia tsy manan-kery ary miverina mandray ny asa maha mpitsara ahy aho ».
Mpitsara niasa teo anivon’ny Fampanoavana Fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo i Fanirisoa Ernaivo. Efa filohan’ny SMM (Sendikan’ny Mpitsara eto Madagasikara) ary izy no vehivavy voalohany nitantana io sendika io, sendika izay nijoro tamin’ny 1992.
Anisan'ireo vy nahitana ny hetsi-bahoaka, izay ny sendika no anisan'ny nampihetsika azy ny volana aprily 2018, nananfaingana ny fialan'i Hery Rajaonarimampianina, ka nahazoan'i Andry Rajoelina nametraka ny Praiminisitra Ntsay Christian, izay nitarika hatrany amin'ny fandreseny ho filoham-pirenena, i Fanirisoa Ernaivo.